Nepali Christian Bible Study Resources - पवित्र आत्माको अन्तरवास
» अध्ययन मालाहरू » पवित्र आत्माको व्यक्तित्व र कार्य » ४ पवित्र आत्माको अन्तरवास
पवित्र आत्माको अन्तरवास
पाठ ४—पवित्र आत्माको अन्तरवास
सामान्य अर्थमा, पवित्र आत्माको अन्तरवास भनेको पवित्र आत्मा विश्वासीभित्र वास गर्नुहुन्छ भन्नु हो। उहाँ विश्वासीभित्र जिउनुहुन्छ। विश्वासीको हृदय नै उहाँको घर हो। उहाँ त्यहीँ रहनुहुन्छ।
१.पवित्र आत्मा मभित्र जिउनुहुन्छ भनी मैले कसरी थाह पाउँछु?
यसको जवाफ रोमी ८:९ मा पाइन्छ—“तर साँच्चै परमेश्वरका _________ तिमीहरूभित्र _________ गर्नुहुन्छ भने तिमीहरू शरीरमा छैनौ, तर आत्मामा छौ। तर कुनै मानिससँग ख्रीष्टका __________ हुनुहुन्न भने त्यो उहाँको होइन”। यदि कुनै व्यक्तिसँग पवित्र आत्मा हुनुहुन्न भने, ऊ उहाँको होइन। ऊ ख्रीष्टको होइन। ऊ विश्वासी होइन। यदि म मुक्ति पाएको मानिस हुँ भने, मसँग पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। मैले कसरी यो कुरा जान्दछु? परमेश्वरले त्यसो भन्नुभएको हुनाले म यो जान्दछु। ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने सबैले आत्मालाई प्राप्त गरेको हुन्छ (यूहन्ना ७:३९)। पावलले भने, “हामीभित्र __________ गर्नुहुने पवित्र आत्माद्वारा” (२ तिमोथी १:१४), र साँचो गरी रगतद्वारा किनिएको हरेक परमेश्वरको सन्तानको सवालमा यो साँचो हो। परमेश्वरको व्याख्या अनुसार (१ कोरिन्थी ६:१९; रोमी ८:९; यूहन्ना ७:३९ इत्यादि), ख्रीष्टियन भनेको ऊ हो जसमा पवित्र आत्मा वास गर्नुहुन्छ र त्यसैले उसले पवित्र आत्मा पाएको हुन्छ। विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिएको तर पवित्र आत्मा नपाएको व्यक्ति कोही हुँदैन।
ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने मानिसले पवित्र आत्मा पाएको छ र ऊ उहाँको अन्तरवासको उपस्थितीमा रमाउँछ भन्ने तथ्य कुनै आत्मपरक र प्रश्नास्पद अनुभवमा आधारित हुँदैन। यो परमेश्वको बचनको स्पष्ट वक्तव्यमा आधारित हुन्छ।
के तपाईंले पवित्र आत्मा पाउनुभयो? एकपटक यो आधारभूत प्रश्नलाई विचार गरौं, “के तपाईंले पवित्र आत्मा पाउनुभयो?” बाइबलको जवाफ के हो? १ कोरिन्थी ६:१९-२० मा शारीरिक कोरिन्थीहरूभित्र (१ कोरिन्थी ३:१-३) समेत पवित्र आत्मा हुनुहुन्थ्यो: “अथवा के यो तिमीहरूलाई थाह छैन? तिमीहरूको शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो, जो तिमीहरूभित्र हुनुहुन्छ, जसलाई तिमीहरूले परमेश्वरबाट पायौ, र तिमीहरू आफैका होइनौ”। कसरी पवित्र आत्मा उनीहरूभित्र हुन सक्नुहुन्थ्यो? उनीहरूले कसरी उहाँलाई पाए? के उनीहरूले ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको समयमा उहाँलाई पाएका हुन्?
यूहन्ना ७:३८-३९ चाबी खण्ड हो। पवित्र आत्माको बारेमा यसले के भन्छ भनी ध्यान दिनुहोस्। विश्वास गर्नेहरू नै पाउनेहरू हुन्। यदि तपाईंले ख्रीष्टमा विश्वास गर्नुभएको छ भने तपाईंले पवित्र आत्मालाई पाउनुभएको छ। पवित्र आत्मालाई नपाउने कुनै विश्वासी हुँदैन। त्यसैले, चाबी प्रश्न यो होइन, “के तपाईंले पवित्र आत्मा पाउनुभयो?” तर यो हो, “के तपाईंले येशू ख्रीष्टलाई पाउनुभयो?” (यूहन्ना १:१२ हेर्नुहोस्)। यदि तपाईंले ख्रीष्टलाई पाउनुभएको (ग्रहण गर्नुभएको) छ भने, तपाईंसँग पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने तर पवित्र आत्माद्वारा वास नगरिएको कुनै पनि विश्वासी हुँदैन।
२.पवित्र आत्माको अन्तरवासको अनुपमता
पुरानो नियमका समयहरूमा पवित्र आत्मा यदाकदा मानिसहरूमाथि आउने गर्नुहुन्थ्यो र केही निश्चित प्रयोजनहरूका निम्ति सामर्थ्य दिने गर्नुहुन्थ्यो। यहाँ केही उदाहरणहरू छन्:
वर्तमान समयमा पवित्र आत्माको सेवकाइको अनुपमतालाई देखाउने चाबी खण्ड यूहन्ना १४:१६-२० हो। आत्माको आगमन बीच बीचमा रोकिएर हुने (अन्तर्विराम) नभइ स्थायी हुनेछ भनी १६ पदबाट सिक्न सकिन्छ। उहाँ आउनुहुने अनि छोडेर जानुहुने र फेरी आउनुहुने र त्यसपछि फेरी छोडेर जानुहुने कार्य हुनेछैन। होइन, उहाँ जब आउनुहुनेछ, उहाँ ___________ उनीहरूसँगै रहनुहुनेछ (१६ पद)।
यूहन्ना १४:१७ मा पेन्टकोस्ट अगाडि र पेन्टेकोस्ट पछाडि पवित्र आत्माको सेवकाइ कस्तो हुनेछ भनी वर्णन गरिएको छ:
त्यस दिन पवित्र आत्मा मात्र होइन, तर येशू ख्रीष्ट नै उनीहरूभित्र हुनुहुनेथियो (यूहन्ना १४:२०): “त्यस दिन तिमीहरूले, म मेरा पितामा छु, अनि तिमीहरू ममा, र _____ ___________ छु भनी जान्नेछौ”। परमेश्वरका आत्माले यो सम्बन्धलाई सम्भव गराउनुहुन्छ। यूहन्ना ६:५६ सित तुलना गर्नुहोस्। यो सम्बन्धलाई दाखको बोट र हाँगाको सम्बन्धद्वारा चित्रण गरिएको छ (यूहन्ना १५:१-६)। प्रभु येशू दाखको बोट हुनुहुन्छ (१ पद) र उहाँका विश्वासीहरूचाहिँ हाँगाहरू हुन् (५ पद)। हामी उहाँमा छौं र उहाँ हामीमा हुनुहुन्छ। हाँगा बोटमा हुन्छ, त्यहाँमा अति सुन्दरतासाथ गाँसिएको हुन्छ। बोटको जीवन पनि हरेक हाँगाभित्र र हरेक हाँगाद्वारा बहन्छ। यूहन्ना १७:२३ र यूहन्ना १७:२६ मा प्रभू येशू अद्भुत तरिकाले आफ्ना विश्वासहरू भित्र हुनुहुने त्यस अनुपम सम्बन्धको बारेमा सिक्न सक्छौं। “म तिनीहरूमा”
कलस्सी १:२६ मा पावलले युगौंदेखि लुकाई राखिएको र________ बारेमा बताउँछन्। यस रहस्यको बारेमा अब्राहाम, दाऊद, यशैया र दानियललाई केही कुरा थाह थिएन। यस रहस्यको बारेमा बप्तिस्मा दिने यूहन्नालाई पनि थाह थिएन। यो रहस्य थियो जुनचाहिँ परमेश्वरको प्रेमिलो हृदयमा लुकाई राखिएको थियो र उहाँले यसलाई थाह गराउन नचाहनुभएसम्म प्रकट गरिएको थिएन। के परमेश्वरले अहिले आफ्ना जनहरूलाई यो रहस्य प्रकट गर्दै हुनुहुन्छ (कलस्सी १:२६)? ________________ २७ पदमा, यो रहस्य के हो भनी पावलले प्रकट गर्छन्। यो अति महिमीत कुरा हो किनभने उनले “यो रहस्यको __________” (२७ पद) को बारेमा बताएकाछन्। यो अति मूल्यवान कुरा हो किनभने उनले “यो रहस्यको महिमाको ______” (कलस्सी १:२७) को बारेमा बताएका छन्। यो रहस्यलाई उनले यसरी परिचय गराउँछन्, “महिमाको आशा, ख्री____ ___________भित्र” (२७ पद)। ख्रीष्ट आफ्ना जनहरू भित्र हुनुहुन्छ। परमेश्वर ढुङ्गाले बनाइएका मन्दिरमा होइन, तर विश्वासीहरूको शरीरमा अन्तरवास गरिरहनुभएको छ। उहाँ व्यक्तिगत रूपमा प्रत्येक विश्वासीको शरीरभित्र अन्तरवास गर्नुहुन्छ (१ कोरिन्थी ६:१९)। मेरो हृदय ख्रीष्टको घर हो!
परमेश्वरको मन्दिरको महत्त्व
मन्दिर त्यो ठाउँ थियो जहाँ परमेश्वर बस्नुभयो र आफ्नो अद्भुत उपस्थितीलाई एउटा अति नौलो तरिकाले प्रकट गर्नुभयो।
क. भेट हुने पाल
“तब बादलले भेट हुने पाललाई ढाक्यो, र परमप्रभुको ___________ पवित्रस्थानलाई ________________। अनि भेट हुने पालमाथि बादल बसिरहेको र परमप्रभुको _____________ निवासस्थानलाई __________ हुनाले मोशा त्यसभित्र पस्न सकेनन्।” (प्रस्थान ४०:३४-३५)।
परमेश्वरले भेट हुने पालमा आफ्नो उपस्थिती प्रकट गर्नुभयो। परमेश्वर आफ्ना जनहरूको बीचमा हुनुहुन्थ्यो, र उनीहरू सबैलाई यो कुरा थाह थियो। उनीहरूले दिनमा बादल र रातमा आगोको खाँबो देख्न सक्थे (शेकाइना महिमा)। “शेकाइना महिमा” भनेको परमेश्वरको उपस्थितीलाई देख्न सकिने प्रकटिकरण हो। परमेश्वर आफ्नो पवित्रस्थानमा हुनुहुन्थ्यो।
“अनि यस्तो भयो – जब पूजाहारीहरू पवित्रस्थानबाट निस्केर आए, तब परमप्रभुको भवन यतिसम्म __________ (शेकाइना महिमा) भरियो, कि त्यस बादलले गर्दा पूजाहारीहरू सेवा गर्नलाई खडा रहन सकेनन्; किनकि परमप्रभुको ____________ परमप्रभुको भवन ___________ थियो” (१ राजा ८:१०-११)।
भेट हुने पाल एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा सार्न सकिने मन्दिर थियो। सुलेमानको मन्दिर यरूशलेममा अवस्थित एक स्थायी मन्दिर थियो जसलाई सार्न सकिँदैनथियो। खडा भएका सानदार भवनहरूमध्ये यो पनि एक थियो। परमेश्वरले पुनश्च: मन्दिरको महापवित्रस्थानबाट आफ्नो उपस्थितीलाई प्रकट गर्नुभयो। “साँच्चै मैले तपाईंका निम्ति एउटा __________________ भवन, तपाईंका निम्ति सदा-सर्वदा बस्ने एउटा स्थान बनाइदिएको छु” (१ राजा ८:१३)। परमेश्वर सुलेमानको मन्दिरमा वास गर्नुभयो, तर धेरै वर्ष पछाडि इस्राएलको अनाज्ञाकारिता र मूर्तीपूजाको कारणले परमेश्वरको महिमाले मन्दिरलाई छोडेर गयो। इजकिएल १० अध्यायले मन्दिरबाट परमेश्वरको महिमा जाने दु:खद घटनाको विवरण दिँदछ (विशेषगरी ४ र १८ पदहरू पढ्नुहोस्; इजकिएल ११:२२-२३ पनि पढ्नुहोस्)।
ग.पुनर्निर्माण गरिएको मन्दिर
ई.पू. ५८६ मा बेबिलोनका राजा नबूकद्नेस्सरले सुलेमानको भव्य मन्दिर तहस-नहस गरिदिए। केही समय पछि यहूदीहरूको सानो भाग आफ्नो भूमीमा फर्कियो र यहूदी शासक जरूबाबेल र महापूजाहारी यहोशूको अधिनमा मन्दिरको पुनर्निर्माण गर्यो (हाग्गै र जकरिया अगमवक्ताहरूले त्यही समयमा आफ्ना सेवकाइ गरेका थिए)। उक्त मन्दिरको पुनर्निर्माणको विवरण एज्राको पहिलो ६ अध्यायहरूमा दिइएको छ। यो दोस्रो मन्दिर सुलेमानको मन्दिर झैं भव्य थिएन, र जरूबाबेलको मन्दिरको जग बसालिँदा अझै पनि सुलेमानको मन्दिर सम्झन सक्ने केही वृद्ध मानिसहरू ठूलो सोरले _______ (एज्रा ३:१२)। भेट हुने पाल र सुलेमानको मन्दिरभन्दा ठीक विपरीत, यस पुनर्निर्माण गरिएको मन्दिर परमेश्वरको महिमाले भरिएको कुरा हामीलाई बताइएको छैन। पहिलो शताब्दीमा येशू ख्रीष्ट उक्त मन्दिरमा नआउन्जेल त्यहाँ महिमा आएको थिएन। प्रभु अचानक आफ्नो ___________ भनी मलाकी भविष्यवक्ताले दाबी गरेका थिए (मलाकी ३:१)। प्रभु येशू महिमाले भरपूर हुनुहुन्थ्यो (यूहन्ना १:१४), तर येशू यस संसारमा हुनुहुँदा प्राय: समय उहाँको महिमामा घुम्टो लगाइएको थियो। उहाँका तीन चेलाहरूले उहाँको रूप परिवर्तन भएको डाँडामा उहाँको महिमाको पूर्ण प्रकटिकरणलाई देख्ने सुअवसर पाएका थिए (मत्ती १७:१-९)।
प्रभु येशू इस्राएलको राजाको रूपमा इन्कार गरिनुभयो र यरूशलेमको ढोकाहरूभन्दा बाहिर कलवरीको डाँडामा क्रूसमा टङ्गाइनुभयो। चार दशक पछि, ७० ई.सं. मा, पुनर्निमाण गरिएको उक्त मन्दिर (जसलाई हेरोद महानले बढाएका र अति सुन्दर बनाएका थिए—यूहन्ना २:२०), रोमी सिपाहीद्वारा नष्ट गरियो। त्यस समयदेखि, पृथ्वीमा कुनै यहूदी मन्दिर छैन। तर हामीले आज देखेजस्तै, वर्तमान समयमा पृथ्वीमा परमेश्वरको मन्दिर छ, जसमा पवित्र आत्मा अन्तरवास गर्नुहुन्छ।
भविष्यको कुनै एउटा समयमा यहूदीहरूले आफ्नो भूमीमा पुन: मन्दिर निर्माण गर्नेछन् र पहिलो शताब्दी देखि कहिल्यै नचढाइएका पशु बलिदानहरू पुन: चढाउनेछन्। दानियल ९:२७ मा ख्रीष्ट-विरोधीले इस्राएलसित सात वर्षको निम्ति करार बाँध्नेछ र उक्त करारबाट करिब सात वर्षको समयावधि सुरु हुनेछ भनी हामी जान्दछौं। सात वर्षको यस समयावधिको बीचमा, ख्रीष्ट-विरोधीले उक्त करार भङ्ग गर्नेछ र बलिदानहरूलाई रोक्नेछ (दानियल ९:२७)। यस समयमा ख्रीष्ट-विरोधीले (“पापको पुरुष”, प्रकाश १३ को पहिलो “पशु”) आफैंलाई माथि उचालेर र आफू परमेश्वर भएको दाबी गर्दै मानिसहरूलाई आफ्नो पूजा गर्न बाध्य तुल्यार मन्दिर अपवित्र पार्नेछ (मत्ती २४:१५; २ थेस्स्लोनिकी २:३-१२; प्रकाश १३ अध्याय)। संकष्टकालको यस मन्दिरलाई परमेश्वरको महिमाले भर्नेछ भनी पवित्र-शास्त्रले कहीँ जनाउँदैन।
ख्रीष्टको राज्यको हजार वर्षे समयकालमा, इजकिएल ४०-४८ अध्यायहरूमा विस्तृत विवरणका साथ वर्णन गरिएको वैभवपूर्ण मन्दिर हुनेछ। इजकिएल ४३:५ मा लेखिएको छ, “परमप्रभुको _______________ त्यस भवनलाई (मन्दिरलाई) ______________”। परमेश्वरले यस मन्दिरमा एकदम विशेष किसिमले आफ्नो उपस्थितीलाई जनाउनुभयो। परमेश्वर आफ्ना जनहरूको माझमा वास गर्नुहुनेछ (इजकिएल ४३:७)!
च.के अनन्त अवस्थितीमा त्यहाँ मन्दिर हुनेछ?
अनन्त शहर, नयाँ यरूशलेमको बारेमा, हामी यस्तो पढ्नसक्छौं, “अनि त्यसभित्र मैले ________ _________ देखिनँ; किनकि प्रभु सर्वशक्तिमान् परमेश्वर र थुमा त्यसको _____________ हुनुहुन्थ्यो” (प्रकाश २१:२२)। त्यहाँ परमेश्वरको महिमा पूर्ण रूपमा प्रदर्शन हुनेछ (प्रकाश २१:२३), त्यसैले त्यहाँ कुनै पनि मन्दिरको खाँचो पर्ने छैन। प्रकाश २१:३ सित तुलना गर्नुहोस् (परमेश्वर उहाँका जनहरूसित वास गर्नुहुनेछ)।
छ.आज संसारमा परमेश्वरको मन्दिर
मत्ती १६:१८ मा प्रभु येशूले एउटा विशेष भवन बनाउनुहुने दाबी गर्नुभयो: “...र यस चट्टानमाथि म आफ्नो ___________ ____________, अनि नरकका ढोकाहरू यसमाथि विजयी हुने छैनन्”। येशूले यी शब्दहरू बोल्नुहुँदा, यस मण्डलीको निर्माण भविष्यमा गरिने कार्य थियो। उहाँले भन्नुभयो, “म ... बनाउनेछु (भविष्यत काल)”। उहाँले “म बनाउँदैछु” भन्नुभएन। यो निर्माण परियोजना पेन्टेकोस्टको दिनमा सुरु हुनेथियो।
परमेश्वरको भवन ईँट वा सिमेन्टबाट बनिनेछैन, तर “जिउँदा प_________” बाट बनिनेछ भनी १ पत्रुस २:५ मा हामीले सिक्दछौं। यो कुनै भौतिक घर हुनेछैन, तर “आ________ घर” हुनेछ (१ पत्रुस २:५)। अचम्मको यस बनावटको निर्माणाधिन पत्थरहरू ख्रीष्टमा भएका विश्वासीहरू हुनेछन्।
यस भवनलाई एफेसी २:१९-२२ मा पनि उल्लेख गरिएको छ। २१ पदमा यसलाई भवन भनिएको छ, तर यसलाई “प्रभुमा एउटा प________ म_________” पनि भनिएको छ। यस मन्दिरमा परमेश्वर आ______द्वारा वास गर्नुहुन्छ (२२ पद)। पवित्र परमेश्वर उहाँको पवित्र मन्दिरमा हुनुहुन्छ।
१ तिमोथी ३:१५ मा जिउँदो परमेश्वरको मण्डलीलाई “प_________को घ____” भनिएको छ। यो परमेश्वरको घर हो किनभने उहाँ यसमा बस्नुहुन्छ र यसभित्र वास गर्नुहुन्छ।
पवित्र आत्मा परमेश्वरको मन्दिर अर्थात मण्डलीमा अन्तरवास गर्नुहुन्छ भनी बताउने दुई ओटा चाबी खण्डहरू छन्: १) १ कोरिन्थी ३:१६—“तिमीहरू परमेश्वरका _________ हौ, र परमेश्वरका ___________ तिमीहरूभित्र _______ गर्नुहुन्छ — के यो कुरा तिमीहरूलाई थाह छैन?” तिमीहरू भनिने शब्दले कोरिन्थीका सबै विश्वासीहरूलाई जनाउँछ। परमेश्वर आफ्नो विश्वासीहरूभित्र, उहाँको मण्डलीभित्र र सबै विश्वासीहरूहरूभित्र वास गर्नुहुन्छ। २) १ कोरिन्थी ६:१९—“अथवा के यो तिमीहरूलाई थाह छैन? तिमीहरूको __________ ___________ ___________ मन्दिर हो, जि तिमीहरू______ हुनुहुन्छ, जसलाई तिमीहरूले परमेश्वरबाट पायौ, र तिमीहरू आफैका होइनौ” हरेक विश्वासीको शरीर नै परमेश्वरको मन्दिर हो, र पवित्र आत्मा परमेश्वरका हरेक सन्तानभित्र वास गर्नुहुन्छ भनी यस खण्डमा सिक्न सकिन्छ।
सबै विश्वासीहरू पवित्र आत्माद्वारा अन्तरवास गरिएका हुँदैनन् भनी कसैले विवाद गर्न चाहन्छ भने, उसलाई सम्झाइनुपर्छ कि शारीरिकपनाको (१ कोरिन्थी ३:१-४) गम्भिर समस्या भएका कोरिन्थीहरूभित्र समेत पवित्र आत्मा वास गर्नुभएको थियो भनी माथी उल्लेख गरिएका यी दुई चाबी खण्डहरूले पनि बताउँदछ। यदि कुनै मानिसमा पवित्र आत्मा हुनुहुन्न भने, “त्यो उहाँको होइन” (रोमी ८:९)। यसको अर्थ हो, यदि उसँग पवित्र आत्मा हुनुहुन्न भने ऊ ख्रीष्टको होइन। अर्थात्, ऊ ख्रीष्टियन होइन। विश्वासद्वारा ख्रीष्टलाई प्राप्त गर्ने हरेकसँग (यूहन्ना १:१२) पवित्र आत्मा पनि हुनुहुन्छ। “तर यो कुरा उहाँले __________ विषयमा भन्नुभयो, जसलाई उहाँमाथी _________ गर्नेहरूले ________ लागेका थिए; किनकि पवित्र _________ अझैसम्म दिइनुभएको थिएन’ किनभने येशू अझै महिमित हुनुभएको थिएन” (यूहन्ना ७:३९)। पवित्र आत्मा पछि, पेन्टेकोस्टको दिनमा दिइनुहुनेथियो। ख्रीष्टमा विश्वास गर्नेले पवित्र आत्मा पाउनेछ भनी यूहन्ना ७:३९ ले सिकाउँदछ।
१.	मेरो निम्ति व्यक्तिगत रूपमा पवित्र आत्माको अन्तरवासको के अर्थ हुन्छ?
पहिलो, यो विचार स्वयंले पनि मलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। परमेश्वर मभित्र हुनुहुन्छ! जीवित परमेश्वर मभित्र जिउनुहुन्छ। परमेश्वर मभित्र वास गर्नुहुन्छ। म परमेश्वरको घर र परमेश्वरको मन्दिर हुँ! कस्तो अद्भुत विचार! हरेक दिन मैले यो तथ्यलाई सम्झनुपर्छ: “ख्रीष्ट _______ जिउनुहुन्छ” (गलाती २:२०)। ख्रीष्ट ममा जिउँछन् नामक भजनको शब्दहरू हेर्नुहोस्।
दोस्रो, यस तथ्यले मलाई ख्रीष्टिय जीवन जिउन उत्साह दिनुपर्छ। ख्रीष्टिय जीवन एउटा अलौकिक जीवन हो। जिउनको निम्ति यो असम्भव जीवन हो। एउटा पवित्र जनझैं जिउनु, पवित्रतामा हिँड्नु, मेरो उच्च बोलावटको योग्य कार्य गर्नु र आत्माले भरिनु असम्भव कुराहरू हुन्। तर म निराश हुनु पर्दैन। असम्भवलाई सम्भव तुल्याउन एकजना अलौकिक व्यक्ति मभित्र जिउनुहुन्छ! म सक्दिनँ, तर उहाँले सक्नुहुन्छ! म अयोग्य छु, तर उहाँ योग्य हुनुहुन्छ। ममा कुनै सामर्थ्य वा योग्यता छैन, तर मेरा आँखाहरू उहाँमा लागेका छन्! ममा कार्य गर्नुहुने ती व्यक्तिद्वारा म ख्रीष्टिय जीवन जिउन सक्छु (एफेसी ३:२०)।
तेस्रो, यस तथ्यले मेरो जीवन अरूहरूको निम्ति आशिष हुन सम्भव गराउँछ। यूहन्ना ७:३८-३९ ध्यानपूर्वक पढ्नुहोस्। मेरो जीवन अरू व्यक्तिहरूमा भरियोस् भन्ने इच्छा परमेश्वर गर्नुहुन्छ। म भित्रबाट जि_______ पानीका नदीहरू बहनेछ (यूहन्ना ७:३८)! यसलाई सम्भव तुल्याउन मभित्र पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। उहाँको जीवन मबाट बहेर म आफूलाई चिन्ने हरेकलाई ताजा गराउने विश्वासी हुन सक्छु।
चौथो, यस तथ्यले हामीलाई साँचो ख्रीष्टिय एकतामा रमाहट गर्न सहायता गर्दछ: “मेलमिलापको बन्धनमा __________ एकता कायम राख्ने प्रयत्न गर” (एफेसी ४:३)। ममा जिउनुहुने उही आत्मा परमेश्वरको हरेक सन्तानमा पनि वास गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा जब म महसुस गर्दछु, नयाँ गरी जन्मेका अरू व्यक्तिहरूसित भएको मेरो एकतालाई म कदर गर्न थाल्दछु। म मेरा सङ्गि विश्वासीसित हुँदा, उक्त व्यक्तिसँगको एकतामा म रमाहट गर्न सक्छु किनभने हामी दुवै जनाभित्र पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ।
पाचौँ, यस तथ्यको परिणाम स्वरुप त्यहाँ पवित्र जीवन हुनुपर्छ। परमेश्वरको घरको प्रमुख चरित्र के हो (भजनसङ्ग्रह ९३:५)? _____________ पवित्र जन मभित्र जिउनुहुन्छ, र जसरी उहाँ पवित्र हुनुहुन्छ, त्यसरी नै म पनि पवित्र हुनुपर्छ (१ पत्रुस १:१६ सित तुलना गर्नुहोस्)। मभित्र जिउनुहुने पवित्र जनलाई शो________ पार्ने कुनै पनि कुरा मैले गर्नुहुँदैन (एफेसी ४:३०)।
छैठौं, यस तथ्यले मण्डलीमा मेरो व्यवहारलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। “बेथेल” शब्दको अर्थ “परमेश्वरको घर” हो। उत्पत्ति २८ मा, परमेश्वकरो उपस्थितीको कारण याकूब विस्मयकुल भए: “साँच्चै यस _________ परमप्रभु हुनुहुँदो रहेछ; अनि मलाई यो थाह थिएन। अनि उनी डराए, र भने: यो ठाउँ कति डरलाग्दो (विस्मयपूर्ण) रहेछ! यो ___________को ________बाहेक अरू केही होइन” (उत्पत्ति २८:१६ख-१७)। याकूबले त्यस ठाउँको नाम “बेथेल” वा “परमेश्वरको घर” राखे। १ तिमोथी ३:१५ मा मण्डली परमेश्वरको घर हो भनी हामी जान्दछौं; तरैपनि कतिपटक परमेश्वर उहाँका जनहरूभित्र हुनुहुन्छ भन्ने कुरा म बिर्सिन्छु। यस सत्यताले म कसरी व्यवहार गर्छु भन्ने कुरामा ठूलो भिन्नता ल्याउनुपर्छ।
सातौँ, मुक्ति नपाएकाहरूले परमेश्वर आफ्नो मण्डलीको बीचमा हुनुहुन्छ भन्ने जान्नुपर्छ। १ कोरिन्थी १४:२४-२५ लाई ध्यानपूर्वक पढ्नुहोस्। मण्डलीको बारेमा कुन कुराले यस मुक्ति नपाएको व्यक्तिलाई प्रभाव पार्यो (२५ पद)? _____________________________________________________ विश्वासीहरूलाई राम्ररी खुवाइयो भने, उनीहरू स्वस्थ हुन्छन्; उनीहरू स्वस्थ भए भने, ख्रीष्टको जीवन देखिनेछ र परमेश्वरले आफैंलाई जनाउनुहुनेछ!
आठौं, यस तथ्यले हामीलाई शैतानमाथि विजय दिनुपर्छ किनभने “जो _______________ हुनुहुन्छ, उहाँचाहिँ संसारमा हुने (शैतान) भन्दा महान् हुनुहुन्छ” (१ यूहन्ना ४:४)।
१) के तपाईंले पवित्र आत्मा पाउनुभयो?
क्यारिज्म्याटिक व्यक्तिहरूले प्रायः यो प्रश्ना सोध्ने गर्छन्। उनीहरूको यस प्रश्न_को तात्पर्य वास्तवमा यो हो — "के तपाईंले आत्माको बप्तियस्मा पाउनुभयो, अन्य भाषा बोल्ने जस्ता क्यारिज्म्याटिक अनुभव पाउनुभयो?"
हामी त्यस आधारभूत प्रश्न मा नै फर्कौं, "के तपाईंले पवित्र आत्मा पाउनुभयो?" बाइबलले दिने जवाफ के हो त? १ कोरिन्थी ६:१९-२० अनुसार कोरिन्थका सबै विश्वासीहरूभित्र, अँ, शरीरअनुसार हिँड्ने विश्वासीहरू (१ कोरिन्थी ४:१-३) भित्र समेत, पवित्र आत्मा हुनुहुन्थ्यो — "के यो तिमीहरूलाई थाह छैन? तिमीहरूको शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो, जो तिमीहरूभित्र हुनुहुन्छ, जसलाई तिमीहरूले परमेश्वरबाट पायौ, र तिमीहरू आफैका होइनौ।" उनीहरूले पवित्र आत्मालाई नपाएका भए कसरी उहाँ उनीहरूभित्रहुन सक्नुहुन्थ्यो र? यो प्रस्ट छ, तिनीहरूले जुन घडी मुक्ति पाए त्यही घडी नै उनीहरूले पवित्र पाएका थिए।
यूहन्ना ७:३८-३९ महत्त्वपूर्ण छ। पवित्र आत्मा पाउने विषयमा त्यहाँ जे भनिएको छ त्यसमा राम्ररी ध्यान दिनुहोस्। विश्वास गर्नेहरू नै पाउनेहरू हुन्। यदि तपाईंले ख्रीष्टमा विश्वास गर्नुभएको छ भने तपाईंले पवित्र आत्मा पाइसक्नुभएको छ। तसर्थ, चाबी प्रश्नय "के तपाईंले पवित्र आत्मा पाउनुभयो?" भन्ने नभएर "के तपाईंले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्नुभयो?" भन्ने हो (हेर्नुहोस् यूहन्ना १:१२)।
२) पवित्र आत्मा तपाईंभित्र बास गर्नुहुन्छ भनेर तपाईं कसरी जान्नुहुन्छ?
क्यारिज्म्याटिक जवाफ यस प्रकार छ:
"पवित्र आत्मा मभित्र बास गर्नुहुन्छ भनेर म कसरी जान्दछु?" क्यारिज्म्याटिक नवीकरण (Charismatic Renewal) को जवाफ छ — "पवित्र आत्माको बप्ति्स्माले अर्थात् एउटा यस्तो शक्तिशाली अनुभवले जसले यसको प्रापकलाई परमेश्वर वास्तविक हुनुहुन्छ भनेर विश्वस्त तुल्याउँदछ" (रिचार्ड कबीडो, दि न्यू क्यारिज्म्याटिक्स् प्रथम संस्करण, पृष्ठ २)।
अर्को शब्दमा, "यो साँचो हुनुपर्छ किनकि मैले त्यो अनुभव गरेको छु। ममा त्यो भावना आएकै हो। यो त म आफैले अनुभव गरेको कुरा हो।"
बाइबलीय जवाफ रोमी ८:९ मा पाइन्छ:
"तर साँच्चै परमेश्वरका आत्मा तिमीहरूभित्र बास गर्नुहुन्छ भने तिमीहरू शरीरमा छैनौ, तर आत्मामा छौ। तर कुनै मानिससँग ख्रीष्टका आत्मा हुनुहुन्न भने त्यो उहाँको होइन।"
यदि कुनै व्यक्तिसँग पवित्र आत्मा हुनुहुन्न भने त्यो व्यक्ति उहाँको होइन। ऊ ख्रीष्टको होइन। ऊ एक ख्रीष्टियन होइन। यदि म मुक्ति पाएको व्यक्ति हुँ भने मसँग पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। म यो कसरी जान्दछु? म यो जान्दछु, किनभने परमेश्वले सो भन्नुभएको छ। ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने प्रत्येकले पवित्र आत्मा पाइसकेका हुन्छन् (यूहन्ना ७:३९)। पावल भन्छन्, "हामीभित्र पवित्र आत्मा बास गर्नुहुन्छ" (२ तिमोथी १:१४) अनि यो कुरा परमेश्वरको रगतले किनिएको हरेक जनको सम्बन्धमा साँचो हुन्छ। परमेश्वरको परिभाषा (१ कोरिन्थी ६:१९, रोमी ८:९, यूहन्ना ७:३९ आदि) अनुसार ख्रीष्टियन भनेको त्यो व्यक्ति हो जसभित्र पवित्र आत्माले बास गर्नुहुन्छ अर्थात् जसले पवित्र आत्मा पाइसकेको हुन्छ। विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिएको हुनु तर पवित्र आत्मा नपाएको हुनु असम्भव कुरा हो। पवित्र आत्माको प्राप्ति र उहाँको हामीभित्रको उपस्थिति कुनै आत्मगत (subjective) र शंकास्पद अनुभवमा आधारित छैन। यो त परमेश्वरको वचनको स्पष्ट अभिव्यक्तिहरूमा आधारित छ।
« पवित्र आत्माको पुनर्जीवन दिने कार्य
पवित्र आत्माको छाप मार्ने सेवकाइ »